Naghachi Outlook Express Ozi ịntanetị sitere na draịva & diski
DataNumen Outlook Express Drive Recovery bụ a FREE ngwá ọrụ iji naghachi Outlook Express ozi ịntanetị site na draịva & diski ozugbo. Ọ bụrụhaala na ị chekwara Outlook Express DBX ma ọ bụ MBX faịlụ na mpaghara draịva ma ọ bụ diski n'oge gara aga, mgbe ahụ maka ihe ọ bụla kpatara na ịnweghị ike ịnweta ya Outlook Express ozi ịntanetị, ị nwere ike iji ngwa anwansi a weghachite ozi ịntanetị gị.
4.90 / 5 (site na 1,553 votes)
Gịnị mere DataNumen Outlook Express Drive Recovery?
Ngwọta maka ịgbaso nsogbu ndị a:
Hichapụ ya Outlook Express .dbx faịlụ na mgbe efu nke egweri biini site ndudue.
Na-adịgide adịgide ihichapụ Outlook Express .dbx faịlụ na ndudue.
Hazie draịva nwere Outlook Express .dbx faịlụ na ndudue.
Hichapụ nkebi nwere Outlook Express .dbx faịlụ na ndudue.
Re-nkebi disk na ndudue na lost draịva nwere faịlụ .dbx.
Enweghị ike ịgụ draịva ma ọ bụ diski nwere faịlụ .dbx n'ihi ọdịda ngwaike.
Mbanye ma ọ bụ diski nwere faịlụ dbx enweghị ike ịbụ starTed ma ọ bụ ghọtara n'ihi nrụrụ aka na MBR, okpokoro nkebi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
Maka okwu niile dị n'elu, yana ikpe ndị ọzọ mgbe ịnweghị ike ịnweta ya Outlook Express data echekwara na mpaghara gị draịva ma ọ bụ diski, ị nwere ike mgbe niile na-aga DataNumen Outlook Express Drive Recovery.
Main Akụkụ na DataNumen Outlook Express Drive Recovery v1.0
Nkwado iji weghachite nsụgharị niile nke Microsoft Outlook Express ozi ịntanetị.
Nkwado iji weghachite Outlook Express ozi ịntanetị site na draịva ọ bụla ma ọ bụ diski ọ bụla, dịka diski ike, draịva flash, diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado iji weghachite Outlook Express ozi ịntanetị site na mgbasa ozi rụrụ arụ.
Nkwado iji weghachite ọtụtụ draịva na diski.
Nkwado iji nwetaghachi draịva ma ọ bụ diski dị ka 16777216 TB (ntụgharị 17179869184 GB).
iji DataNumen Outlook Express Drive Recovery iji weghachite ozi ịntanetị
Ọ bụrụhaala na ị chekwara Outlook Express data na draịvụ ma ọ bụ diski gị, wee nwee ihe kpatara na ịnweghị ike weghachite ma ọ bụ nweta gị Outlook Express data, ị nwere ike iji mgbe niile DataNumen Outlook Express Drive Recovery iji gbakee Outlook Express ozi ịntanetị site na draịva ma ọ bụ diski maka gị. The natara ozi na-echekwa dị ka .eml faịlụ na ike ga-adị mfe dị azụ Outlook Express.
Mara: N’oge na-adịghị anya, DATA ọdachi dakwasịrị gị OUTLOOK EXPRESS DATA dị na isi iyi drawer ma ọ bụ diski, Biko Edekwala ma ọ bụ ịgbanwe ihe ọ bụla data NA draịva ma ọ bụ diski ọ bụla. DOEDR GA-AKAN RE AKWATAKWỌ data site na draịva ma ọ bụ diski na agaghị edekwa ma ọ bụ gbanwee ihe ọ bụla data na ya!
Cheta na: Tupu ị gbakee Outlook Express ozi ịntanetị na DataNumen Outlook Express Drive Recovery, biko mechie Outlook Express.
Ọ bụrụ na ndị ezi uche dị na mbanye ebe gị Outlook Express dbx faịlị bụ nke izizi echekwara ka dị ma nha ya ma ọ bụ ọnọdụ ya agbanwebeghị, biko biko họrọ draịva ahụ ka a ga-enyocha ya:
Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ezi uche mbanye adịghị adị ọzọ, n'ihi re-nkebi nke disk, lost nke MBR ma ọ bụ nkebi ozi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ka a na-agbanwe ma ọ bụ weghachite ya na ngwaọrụ ndị dị ka Part Magic, mgbe ahụ ị kwesịrị ịtọ diski diski niile na-echekwa faịlụ dbx dị ka diski isi nke a ga-enyocha:
Ọ bụrụ na ị pịnye-na ma ọ bụ si a mbughari disk na kọmputa gị mgbe DataNumen Outlook Express Drive Recovery na-oru, ị nwere ike pịa bọtịnụ iji mee ka draịva na ndepụta diski nwee ume na igbe ngwakọta.
Biko họrọ folda mmepụta:
All natara ozi ịntanetị ga-azọpụta dị ka .eml faịlụ na mmepụta nchekwa. Nwere ike itinye aha folda mmepụta ihe ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ nchekwa.
Mara: Iji gbochie igbochi gị OUTLOOK EXPRESS Data na isi iyi ma ọ bụ diski, Biko Họrọ ihe mmepụta nchekwa na isi iyi drawer ma ọ bụ diski.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Outlook Express Drive Recovery ga start na-enyocha nyocha ma ọ bụ diski ahọrọ, ma na-agbake ozi ịntanetị na ya. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro mgbake, ọ bụrụ na enwetaghachila ozi ọ bụla site na draịva ma ọ bụ diski nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe natara ozi Outlook Express site na ịpị abụọ na ịpị akara ngosi nke faịlụ .eml na ndekọ mmepụta. Ma ọ bụ mbubata otutu ozi n'ime a mail nchekwa na Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Drive Recovery A tọhapụrụ 1.0 na August 5, 2009